Geedka Badweynta: asalka, astaamaha iyo firfircoonida | Saadaasha Shabakadda
Haddii aad baraneyso cilmiga geology-ga hubaal waad maqashay badweyn. Fikradeeda waxaa lagu sharaxay qaab xoogaa adag. Waxay ka tirsan tahay aragtiyada abuuritaanka dhulka sida saxanka tectonics. Waa aragtiyahaas kuwa taageeraya asalka xeebta badda.
Oo waa in xeebta badda ay tahay wax aan ka badnayn buuraha biyaha hoostooda ku jira ee ay sameeyeen barokaca taarikada tectonic. Ma rabtaa inaad ogaato asalka, astaamaha iyo noocyada gunta badda ee ka jira meeraheenna?
1 Astaamaha iyo asalka xeebta badweynta
2 Qaab dhismeedka dhabarka
3 Kakanaanta badweynta
4 Firidhsan Dorsal
Astaamaha iyo asalka xeebta badweynta
Markii dhowr taako oo bartamaha-baddu ka samaysmaan badda hoosteeda, nidaamyada buuraha dhabta ah ayaa laga sameeyaa badda hoosteeda. Buurta ugu weyn ee biyaha hoostooda kuyaala waa kuwa ugu waaweyn adduunka taako masaafo dhan 60.000 oo kilomitir. Xeebaha badda waxaa kala sooca wabiyada badda.
Asalkiisa waxaa bixiya dhaqdhaqaaqa taarikada tectonic ee sameysma qolofka dhulka. Qulqulka ku urura safafka buuraleyda badda hoosteeda ayaa ugu yaraan toban jeer ka sii dhumuc weyn kuwa ku yaal berriga. Tani waxay dhalisaa aragtida geosyncline. Tani waa aragtida sheegaysa in qolofka qaaraddu uu sii kordhayo iyada oo ay ugu wacan tahay soo-ururinta horusocodka iyo baaxadda leh ee ka soo bilaabatay geosynclines-ka qadiimiga ah. Waqti ka dib way sii adkaadeen oo ay ku xoojiyeen taarikada hadda jirta.
Qaab dhismeedka dhabarka
Inta badan safafka buurahan hoostooda waa la gaari karaa cabir u dhexeeya 2000 iyo 3000 mitir oo dherer ah. Guud ahaan waxay leeyihiin gargaar adag, oo leh meelo dhaadheer oo dhaadheer iyo buuqyo aad u muuqda. Markay riigaggan jeex jeexan yihiin waxaa la yiraahdaa doox ama sii jeexan. Dhulgariirro fara badan oo gacmeed iyo qaraxyada folkaanaha ayaa ka dhaca dillaacyada kuwaas oo la siidaayo tiro badan oo basal ah.
Basalts waxay siinayaan qaab badda oo dhan. Dhinacyada geeska, dhumucda qolofta fulkaanaha iyo dhumucda qararka ayaa sii kordhaya. Waxa kale oo jira fulkaano biyaha hoostooda ah, laakiin way kala firidhsan yihiin oo cidlo ayay yihiin. Khasab maahan inaad kujirto khilaaf.
Xuduudaha qulqulka waxaa laga heli karaa dhinac dhinac uga barakacay iyada oo ay weheliyaan fiditaano ballaaran oo u dhigma aagagga jabka. Markii aan la kulanno soohdinta u dhexeysa laba taariko, laaf kulul oo dhalaalaya ayaa ka soo baxa dusha sare. Markuu yimaadaba, wuu qaboojiyaa oo xoojiyaa halka qolofka ugu da'da weyn uu u kala baxo labada dhinac ee geeska.
Tani marwalba way rogeysaa. Caddaynta tani waxay tahay in dhaqdhaqaaqa qulqulka badda lagu cabbiray meelo ka mid ah Badweynta Atlantik. Barakaca ilaa laba sentimitir sanadkiiba waa la diiwaangaliyay. Dhinaca kale, bariga Baasifigga, cabirrada barakaca iyo xogta 14 cm sanadkii waa la helay. Tani waxay ka dhigan tahay in qulqulatooyinka bad-weynta aysan meel walba ku soconayn xawaare isku mid ah. Isbeddelka ku imanaya mugga biyaha ee jiinka ayaa sababaya isbeddello yar oo heerka badda ah oo ku saabsan miisaanka juqraafiyeed. Markaan tixraaceyno miisaanka juquraafiga, waxaan ka hadlaynaa kumanaan sano.
Xagga kore ee wiishashka waxaan ka heli karnaa dildilaacyo hydrothermal ah. Uumis leh waxyaabo macdan sare leh ayaa ka soo baxa oo sameeya heerkulka 350 darajo. Marka macdanta la xareeyo, waxay sidaas ku sameeyaan iyaga oo samaynaya qaabab u eg tiirar la mid ah kuwaas oo waxyaabaha aasaasiga ahi ka kooban yahay isku-dhafka birta iyo baaruudda. Salfadiidyadan ayaa awood u leh inay taageeraan gumaysiga xoolaha aan caadiga ahayn. Xerya-dhaqameedyadan ayaa qayb muhiim ah ka ah howlaha hab-nololeedka badda. Thanks to this, ka kooban biyaha ayaa ka xasilloon.
Qolof badeedka cusub ee oceanic-ka ah ee lagu soo saaray qarka oo leh qayb ka mid ah gogosha sare ee marada sare iyo qolofku waxay ka kooban yihiin lithosphere. Dhammaan xarumaha badda waxay ku fidsan yihiin qulqulka badda-dhexe. Sidaa darteed, sifooyin badan oo laga helo goobahan waa kuwo gaar ah.
Waa mowduucyo daraasado badan. Si si qoto dheer loogu ogaado halabuurka iyo isbeddelka cirifyada, lavas basals ayaa la darsay. Lavas-yadan ayaa waxyar aayar lagu aasay meelihii lagu xareeyay dusha oo dhan. Marar badan, qulqulka kuleylka ayaa ugu xoogan gudaha qulqulka adduunka intiisa kale.
Aad bay u badan tahay dhulgariirradu inay ka dhacaan hareeraha iyo, wixii ka sarreeya, khaladaadka isbeddelka. Khaladaadkaani waxay ku biiraan qaybaha gunnada ee magdhawga. Dhulgariirrada ka dhaca goobahan waxaa loo darsaa si qoto dheer si loo helo macluumaad ku saabsan gudaha Dhulka.
Dhinaca kale, waxaa jira xiriir adag oo ka dhexeeya moolka dheer ee uu leexleeyaha baddu la leeyahay da ’ahaan. Guud ahaan, waxaa la muujiyey in qoto dheerida baddu ay u dhigantaa xididka laba jibaaran ee da'da qolofta. Aragtidaani waxay ku saleysan tahay xiriirka ka dhexeeya da'da iyo qandaraaska kuleylka ee qolofka badda.
Inta badan qaboojinta sameynta qulqulka badda ayaa dhacday 80 milyan oo sano ka hor. Waqtigaas, moolka badda waxay ahayd 5 km oo keliya. Xilligan, waxaa lagu yaqaan in ka badan 10.000 oo mitir qoto dheer. Sababtoo ah qaboojintani waa shaqo da 'ahaan, cirifyada si tartiib tartiib ah u faafaya, sida Mid-Atlantic Ridge, ayaa ka cidhiidhsan qulqulka sida ugu dhakhsaha badan u ballaadhinaya, sida East Pacific Ridge.
Ballaca buundada waxaa lagu xisaabin karaa iyadoo lagu saleynayo heerka firidhsan. Waxay badanaa ballaariyaan qiyaastii 160 mm sanadkiiba, taas oo aan qiimo ku lahayn miisaanka aadanaha. Si kastaba ha noqotee, marka la eego miisaanka juquraafi ahaan waa la ogaan karaa. Tirooyinka ugu gaabiska ahi waa kuwaas waa la kala firdhiyaa in yar oo ah 50 mm sanadkii oo ugu dhakhsaha badan ilaa 160 mm.
Kuwa si tartiib tartiib ah u fida ayaa leh kala-yaac kuwa ugu dhaqsiyaha badanna ma leh. Si tartiib tartiib ah u faafinaya buuqyo jeexjeexan ayaa leh qaab-dhismeed aan caadi ahayn oo dhinacyadooda ah, halka qulqulka degdegga ah ee faafinaya ay leeyihiin dhinacyo aad u jilicsan
Sidaad aragtay, cirifka badweynta ayaa ka dhib badan sida la moodo. Dhaqdhaqaaqiisa waxaa lagu qeexay dhaqdhaqaaqa dhulka ee ku jira dhaqdhaqaaq joogto ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Geedka Badweynta: asalka, astaamaha iyo firfircoonida
U jawaab LOLOLOLO